थोक कारखाना मूल्य निर्माता आपूर्तिकर्ता कम्पोस्टेबल झोला १००% बायोडिग्रेडेबल फोहोर प्लास्टिक झोला निर्माता र आपूर्तिकर्ता | Skypurl
कारखाना मूल्य निर्माता आपूर्तिकर्ता कम्पोस्टेबल झोला १००% बायोडिग्रेडेबल फोहोर प्लास्टिक झोला
घरेलु फोहोर झोला मकई स्टार्च र PBAT सामाग्री, जो १००% biodegradable छन् बनेका छन्। फोहोर बैग हात बाट आँसु गर्न सजिलो छैन, कागज कोर degradable छ, र इन्टरफेस humanized छ। बायोडिग्रेडेबल पालतू कचरा बैग आवश्यकताहरु अनुसार आकार, रंग र प्याकेजि्ग मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। कम्पनी एक पर्यावरण मैत्री संसारको सेवा गर्ने उद्यम बन्न प्रतिबद्ध छ!
प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइएको पछि, हामीले फोहोर झोलाको रूपमा के प्रयोग गर्‍यौं? तपाइँ अब पर्यावरण प्रदूषण को बारे मा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी १००% बायोडिग्रेडेबल छौं र दस बर्ष भन्दा बढी को लागी उत्पादन मा विशेष गरीएको छ।
पुन: प्रयोजन कम्पोस्टेबल 90 ०-१80० दिनमा व्यावसायिक कम्पोस्टि facilities सुविधाहरु मा भंग गरेर एकल उपयोग प्लास्टिक को एक दिगो विकल्प प्रदान गर्दछ।
१०-५०-गैलन झोला सबै बेचिन्छ, आवश्यकता अनुसार अनुकूलित
लीक गर्न सजिलो छैन।
कम्पोस्टेबल सामग्री बाट बनेको, १००% बायोडिग्रेडेबल
वस्तु घरेलु biodegradable फोहोर झोला
ब्रान्ड नाम Skypurl
आकार १३ सेमी x c सेमी ३ सेमी
मोटाई 0.025 मिमी
सुविधा कम्पोस्टेबल/ आँसु प्रतिरोध/ लीकप्रूफ
सामाग्री PLA/PBAT/मकै स्टार्च
रंग हरियो, कालो वा तपाइँको आवश्यकता को रूप मा
प्रकार फोहर फोहोर झोला
आवेदन घरेलु झोला/खाद्य बर्बाद/बगैंचा फोहोर
लोगो Skypurl/तपाइँको इच्छा अनुसार अनुकूलित
त्यहाँ घरहरु, पार्कहरु, र कार्यालय स्थानहरु मा आवेदन परिदृश्यहरु को एक विस्तृत श्रृंखला हो, र दैनिक उपयोग धेरै ठूलो छ। यो बायोडिग्रेडेबल फोहोर झोला साधारण प्लास्टिक झोला को समान कार्यहरु छ, र पनी पनरोक छ र उत्कृष्ट airtightness छ। बायोडिग्रेडेबल फोहोर झोला आँसु प्रतिरोधी छ, एक humanized ब्रेकपोइन्ट डिजाइन छ, र प्रयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार विभिन्न रंगहरुमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
१ कम्पोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल सामग्री: मकै स्टार्च र PBAT।
2. उत्कृष्ट सील प्रदर्शन: उत्पादन पनरोक छ र गन्ध इन्सुलेट गर्दछ।
3. बनावट: नरम र आरामदायक, प्रथम श्रेणी अनुभूति।
4. तेल-प्रमाण र पानी-प्रमाण: बिरुवा सामग्री बाट बनेको छ, सतह नरम हुनेछैन।
5. ब्रेकपोइन्ट डिजाइन: सजीलो पहुँच गर्न को लागी, मात्र यसलाई फाल्नुहोस्।
6. OEM/ODM/अनुकूलित:अनुकूलित आकार, रंग, ढाँचा, प्याकेज, बाहिरी बक्स।
अघिल्लो: पालतू कुकुर झोला Poop कस्टम कुकुर अपशिष्ट बैग बायोडिग्रेडेबल को लागी उच्च गुणस्तरीय उत्पादन झोला रद्दीटोकरी।
कम्पोस्टेबल कर्नस्टार्च घरेलु Drawstring फोहोर झोला
कम्पोस्टेबल कर्नस्टार्च घरेलु फ्ल्याट फोहोर बैग
कम्पोस्टेबल Cornstarch घरेलू टी शर्ट फोहोर बैग
कम्पोस्टेबल घरेलु फोहोर झोला
कम्पोस्टेबल Pla घरेलू Drawstring फोहोर झोला
कम्पोस्टेबल पीएलए घरेलु फ्ल्याट फोहोर बैग
कम्पोस्टेबल Pla घरेलू टी शर्ट फोहोर बैग
पालतू कुकुर को लागी उच्च गुणस्तरीय उत्पादन झोला Poop रद्दीटोकरी ...